Ahoana ny fampitomboana ny fitakiana lozam-pifamoivoizana ao Dubai na Emirà Arabo Mitambatra? | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny isan'ny fahafatesan'ny lozam-pifamoivoizana tany UAE nandritra ny valo volana voalohany tamin'ny 2014 dia 463, a Tatitry ny minisiteran'ny atitany kevitra. Ny fanodinana tampoka, ny faninganana haingana, ny tsy fahitana ny halaviran-doza ary ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny fifamoivoizana no antony nahatonga ny valim-pifidianana toy izany. Na dia voamarina aza ny fihenan'ny ratra mifandraika amin'ny fifamoivoizana, dia mbola avo kokoa ny isa.
Raha mitondra fiara ianao, dia tokony ho vonona amin'ny karazana toe-javatra. Ny fananana fiantohana tena tsara sy ny fahafantarana ny fahazoana fitakiana ratra manokana raha misy lozam-pifamoivoizana dia zava-dehibe indrindra. Tokony hiomana amin'ny tranga toy izany ianao. Ny fahafantarana ny fihetsik'antoka amin'ny tranga maika dia hanamora ny fampitomboanao ny fitakiana ny lozam-pifamoivoizana.
Inona no ilaina mba hahatratrarana ny fanarenana mety? Ireto torolàlana momba ny fiantohana ireto dia hanamora ny hahazoanao ny onitra tokony homena anao.
Dokotera Lozam-pifamoivoizana ao Dubai
Raha toa ianao ka misafidy ny hividy fiara efa nampiasaina mandritra ny fijanonanao any Dubai, dia ataovy izay antoka foana fa tsy teo amin'ny lozam-pifamoivoizana izany. Raha izany no izy, azo ahena ny habetsaky ny fanonenanao mety hiantohana.
Ankoatr'izay dia mety mila mandalo fomba fanamboarana lava sy lafo ianao, koa alao antoka fa handinika tsara ny tsara sy fahantrana ianao. Ny fividianana fiara vaovao dia mety hanaporofo kokoa fa mahomby kokoa ary mety hamonjy anao aza ny fotoana. Ankoatr'izay, ireo fiara toy izany matetika dia manana fitaovana fiarovana azo antoka kokoa (izay manome antoka ny fiadananao ary mety hampihena ny fiantohana fiantohana izay tsy maintsy ataonao).
Ny maha-zava-dehibe ny fananana fiantohana tsara
Makà fotoana hifidianana ny orinasa fiantohana tsara sy ny politika mety. Izy roa ireo dia ilaina ho amin'ny fahazoana ny onitra mendrika ho anao amin'ny tranga lozam-pifamoivoizana.
Ny orinasa tsara indrindra dia hanome anao ny onitra ara-pitsaboana sy ara-bola. Izy ireo dia hamonjy ny fotoana sy ny olana mahazo anao. Miantsena foana alohan'ny hisafidianana fiantohana iray na hafa. Ny fampitahana ny safidy eo an-daniny dia ahafahanao mamantatra ireo fahasamihafana sy manondro ireo teny sy fepetra tena mahasoa.
Jereo ny vita pirinty tsara alohan'ny sonia na inona na inona
Aza hadino na oviana na oviana ny atao pirinty. Vakio ny fampahalalana rehetra momba ny fifanarahana alohan'ny fanekena ny politikam-piantohana omena anao. Tsy tokony hisy vidin-javatra miafina na fepetra tsy ahafahana mahazo onitra ara-bola raha sendra misy loza.
Raha tsy fantatrao ny fepetra sy ny fepetra rehetra, dia anontanio ilay repoblika orinasa fiantohana. Hamarino tsara fa fantarinao daholo ny mombamomba azy ireo. Makà fotoana, mieritrereta momba izany ary aza manisy sonia izay tsy tsapanao.
Ampahafantaro ny mpampiasa anao ny fanovana
Aza adino ny hifandraisanao amin'ny mpampiasa anao, alohan'ny hanapahanao manamboatra fanovana amin'ny fiara. Mety ho somary tsy dia saro-kenatra ianao amin'ny famoanao ny fiara misy kirihitra mandritra ny herinandro maromaro, fa ity no safidy tsara kokoa.
Raha ny marina, ny orinasa fiantohana sasany dia mandà ny handoa ny habetsaky ny vola azo ampiasaina raha tsy misy fanovana.
Mitadiava mpisolovava madiodio tena mety
Ny fanamboarana lozam-pifamoivoizana ny lozam-pifamoivoizana any amin'ny firenen-kafa dia mety ho sarotra satria tsy fantatrao ny fepetra momba ny fepetra eo an-toerana. Ny fomba tsara indrindra hiatrehana izany fahasarotana izany dia ny fisafidianan'ny mpisolovava ratra manokana.
Hevitra iray tsara raha misafidy mpisolovava na dia alohan'ny hisafidiananao politika fiantohana. Ny mpisolovava anao dia afaka mitari-dalana anao amin'ny alàlan'ny fizotrany ary manampy anao hisafidy ilay safidy mety indrindra amin'ny zavatra ilainao.
Ilay mpisolovava dia tokony ho olona voantso voalohany koa raha misy loza. Ny mpisolovava anao dia afaka manampy anao handresy ny fahatafintohinana voalohany ary handray ireo fepetra rehetra izay ilaina ho fampitomboana ny fitakiana ny fahavoazana.
Zahao ny lazan'ireo matihanina marobe ary tadiavo ny fizahana antserasera. Tahaka ny amin'ny fisafidianana orinasa fiantohana, dia tokony ho ampy fanontaniana sahady ianao. Ny fitantanan'ireo fiantohana tsy ampoizina dia tokony hovaliana amin'ny fomba matihanina sy mora takatra. Ny fomba fifandraisan'ny mpisolovava dia zava-dehibe, satria ny traikefany amin'ny sehatry ny fiantohana dia mitaky ny lozam-piarakodia.
Misy zavatra maro ilaina tokony hataonao, raha sendra lozam-pifamoivoizana ianao. Ho fanombohana, ho azo antoka fa maka sary be dia be ianao. Tandremo tsara ny fahavoazana amin'ny fiara misy anao ary ampidiro ny fiaran'ny mpamily hafa. Ny sary maro dia tsy isalasalana fa ho porofo lehibe ho an'ny fitakiana fiantohana.
Ireto misy antsipiriany vitsivitsy mety tianao hakana sary amin'ny fakantsary raha sanatria:
Fahavoazana ny fiara roa (ivelany sy anatiny)
Sarin'ireo mari-pamantaran-dàlana akaiky, indrindra raha toa izy ireo
Ny takelaka fahazoan-dàlana sy ny modely amin'ny fiara hafa
Ny marika fitoran-dàlana, ary misy porofo hafa eny an-dalana
Fehezin'ny ratra na fery mihidy
Ny toerana tena misy ny fiara avy hatrany taorian'ny fiantraikany
Makà tatitra momba ny fitsaboana
Na manao ahoana na manao ahoana ny faharatran'ny ratra manokana, dia mila mahita mpanome tolotra ara-pahasalamana voamarina ianao. Ny orinasanao amin'ny fiantohana dia mila porofo momba ny trauma sy ratra izay nitranga nandritra ny loza.
Ny tatitra ara-pitsaboana dia iray amin'ireo antontan-taratasy manan-danja indrindra ho an'ny fitakiana fandratrana manokana. Raha tsy fantatrao izay tokony hatao na inona hangatahana avy amin'ny mpitsabo, antsoy ilay mpisolovava ratrao manokana ary mangataka fitarihana alohan'ny hitsidihana ny toeram-pitsaboana.
Tatitry ny lozam-pifamoivoizana
Ny tatitry ny polisy dia zava-dehibe amin'ny lozam-pifamoivoizana. Izy ireo dia matetika no hita fa porofo tsara indrindra azo atao, ary matanjaka kokoa noho ny sary sy ny kaontin'ny olona manokana momba ny loza.
Hamarino tsara fa hahazo vahana ianao hamerina hijery ny tatitra satria mety misy fampahalalana mahasoa vitsivitsy.
Ny anarana sy ny adiresin'ny vavolombelona vonona ny hijoro ho vavolombelona
Fampahalalana momba ny mpamily hafa voarohirohy tamin'ny fianjerana (ny orinasa fiantohana, ny fahazoan-dàlana, ny fisoratana anarana ary ny antsipirihany manokana)
Famarika manokana momba ny tsy fanarahan-dalàna nataonao
Sary iray sy famaritana henjana ny fomba nitrangan'ny loza
Ny famaritana ny lozam-pifamoivoizana dia tokony ho feno marina, ka azonao antoka fa angataho ilay manampahefana anao ny hilaza aminao izay tena notanisain'izy ireo. Izy io dia afaka hamonjy anao ny fiantohana rehetra dia mitaky fanaintainana sy fijaliana azonao eritreretina.
Saika foana no ho vavolava manodidina ny lozam-pifamoivoizana iray, ka ho azo antoka fa mifandray aminy izy ireo. Angony ny anarany, ny adiresiny ary ny mombamomba anao manokana mety ho vonona homena azy. Hamarino koa, anontanio azy ireo raha mety hanao fanambarana eo anoloan'ny orinasa fiantohana anao izy ireo. Ny sasany amin'ireo vavolombelona dia mety misalasala miresaka momba ny resaka, izay no antony mahatonga ny fametrahana tsipika mifampiresaka ao anatin'ny minitra vitsy aorian'ny zava-doza iray.
Raha toa ka mitory amin'ny tsy hitenenana ny vavolombelona iray, dia azonao atao ny mangataka fanambarana an-tsoratra. Ny fanazavan'izy ireo dia mety hanaporofoana ny maha-zava-dehibe azy ireo mandritra ny lozam-pifamoivoizana.
Aza mitana fampahalalana rehetra
Ny mpisolovava manokana amin'ny ratrao dia hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanaovana fanambarana sy ny fifandraisana amin'ny orinasanao amin'ny fiantohana aorian'ny loza. Ny iray amin'ireo torohevitra lehibe indrindra azonao raisina dia ny fanalavirana ny mombamomba ny mitazona vaovao.
Ny orinasam-piantohana dia manao fanadihadiana lalina alohan'ny hanomezany onitra. Raha manandrana manodinkodina ny zava-nitranga sy ny zava-misy ianao, dia mety ho mahita ny fiantohana. Amin'ny toe-javatra toy izany, hihena ny fotoana mety hahazoanao fanamboarana ny fahavoazana manokana.
Tandremo ny fangatahana fiantohana fiara
Raha sendra lozam-pifamoivoizana maromaro ianao, dia ataovy ho azo antoka foana ny fitazomana ny antontan-taratasy tamin'ny fotoana taloha.
Manampy trotraka ny fihoaran'ny lozam-pifamoivoizana any Dubai Miankina amin'ny fanandraman'ny mpisolovava anao sy ny habetsaky ny fampahalalana izay azonao omena. Ny fahazoana antontan-taratasy ilaina sy fitadiavana vavolombelona taorian'ny lozam-pifamoivoizana iray dia azo antoka fa ho sarotra. Na izany aza, ireo dingana ireo dia hiantoka ny fahasalamanao maharitra. Misintoa tena, antsoy ny mpisolovava ary fenoy ny zavatra ilaina rehetra. Raha mahay manao izany ianao, dia hampitombo ny voka-dratsinao hiatrika fahombiazana haingana.
Hevitra 4 momba ny “Ahoana no hampitomboana ny fitakiana lozam-pifamoivoizana ao Dubai na Emira Arabo Mitambatra?”
09/21/2015 amin'ny 12:37 PM
Azo atao ve ny manome torohevitra anao amin'ny mety hisianana fitakiana (fantatro fa efa navelako teo taloha)
1.Dubai Healthcare City-tranga 2006.
2.Al Zahara Hopitaly- Manana ny tatitra ara-pitsaboana aho. Loza mitovy 2006.
Nandatsaka rano simenitra tany am-piasana aho tany am-piasana tao amin'ny Dubai Healthcare, Al Razi Building tamin'ny 2007. Tamin'izany fotoana izany aho dia dokotera manam-pahaizana manokana momba ny varotra nanodidina ny tranon'ny Al Razi. Trano fitaizana zaza any Dublin.
Izaho dia narary tamin'ny hopitaly Al Zahra tamin'ny 2006.
Tamin'ny taona 2010 aho dia nisy fanoloana ny hip noho ny aretin-kozatra mafy noho ny fahatapahan-dàlan-tsamokom-bolo avy amin'i Al Zahara ao an-damosiko havanana.
Mbola mijaly aho anio satria manana poste complication am-perinasa - fomba fiasa trendelenburg, noho ny fahaverezan'ny hozatra niandry ny fandidiana nandritra ny herintaona.
Efa 43yrs aho tamin'izaho nanolo ny hip-hopako tany amin'ny Hopitaly Amerikanina.
Salama, Adele .. eny azo atao ny mitaky .. Mila eto ianao satria mila tatitra polisy avy amin'ny Polisy ao Dubai izay manaiky ny loza .. inona ny vola notadiavinao?
06/20/2017 amin'ny 8:42 PM
Nahatratra lozam-pifamoivoizana aho tamin'ny 29 Mey.
Nisy olona nandona ny fiarako avy any aoriana.
Tonga teny an-toerana ny pôlisy saingy tsy nahita ny fiarako izy ary nanome endrika maintso aho.
Nilaza izy fa afaka miala sy mandeha any amin'ny orinasanao fiantohana ianao.
Niala ilay sehatra aho rehefa naka ny endrika maintso.
Taorian'ny andro nanombohako ny fanaintainan'ny fanaintainana ambany sy ny tendany.
Tsy afaka niasa 3weeks aho.
Raha namboarina ny fiara ko ary handeha hopitaly dia tsy maintsy mandoa fitaterana aho.
Te hahafantatra ve i Hery amin'ity tranga ity hoe afaka mahazo onitra amin'ny lafiny ara-pitsaboana sy ara-bola ve aho?
08/28/2019 amin'ny 2:09 PM
Ekipa malala ô,
Rose no anarako. Niditra tamina lozam-pifamoivoizana aho tamin'ny 29 Jolay 2019 tao amin'ny Ras Al Khor Road Avaratra. Nandeha manodidina 80-90km / ora aho, nandeha fiara. Dimy metatra miala ny tetezana izay hiaraka aminao mankany International City ilay toerana. Rehefa nitondra fiara sy i Neny, izay teo amin'ny sezan'ny mpandeha aho, dia nahita fiara fotsy iray nidina tamin'ilay lalambe haingana sy nirehitra. Talohan'ny nahafantaranay azy dia nanorenany ny lohanay ny làlambe hiakatra avy amin'ny mpandeha. Ity fiara ity dia avy amin'ny làlan'ny ankavanana ankavananay mankany amin'ny lalantsika (ny ankavia sy ny làlana faha-4) amin'ny hafainganam-pandeha lehibe ary namely ny fiaranay izay nandeha avaratra. Noho ny fiantraikan'ny rivotra airbag dia naparitaka. Kivy aho ary tsy nihetsika nandritra ny fotoana kelikely raha niantso mafy ahy i Neny mba hihazakazaka eo ivelan'ny fiara alohan'ny hahitany afo satria setroka ny fiara. Nivoaka avy tao anaty fiara aho sady mbola gaga ary nahita ra mandriaka. Rehefa tonga saina aho dia niantso polisy sy avy hatrany aho ary nangataka fiara mpitondra marary. Tonga teny an-toerana ny polisy niaraka tamin'ny kamio nidina. Polisy dia nitondra an'i Neny sy ny ilany izahay teny am-pitan'ny arabe mba hiandry ny fiara mpitondra marary. Taorian'ny famotopotorana sy fanadihadiana maro dia nentina tany amin'ny Hopitaly Rashid izahay izay niandrasana adiny iray na roa nialohan'ny fitsaboana anay.
Kivy aho raha tany amin'ny hopitaly satria tsy niantso ahy intsony ny polisy misahana ny fifamoivoizana nanontany ahy hoe aiza no hamindrako ny fiarako, iza no hitondra ny fiarako, iza no mikapoka ny fiaranay sns. Naneno foana ny laharan'ny orinasam-piantohana na niasa foana ny mozika any aoriana raha tsy misy mamaly ilay andalana hafa. Very hevitra be aho ary tsy azoko tsara ny tokony hataoko na miantso vonjy.
Ny ampitson'iny dia nandeha tany amin'ny paositry ny polisy Rashidiya izahay fa nentina tany ny kaontiko ary rehefa hita fa nandositra ilay lehilahy nahavoa ny fiarako.
Tena mahagaga izany.
Mba hampihenana ny tantara fohy dia nahazo maratra ny soroko, ny tratrako, ny sandriko ary ny tànana tapaka ary ny ankihibiana aho. Niditra tao amin'ny hopitaly i Neny 2 andro taorian'ny zava-niseho noho ny fiakaran-dra sy ny fanaintainan'ny tratrany. Angamba afrikanina. Nahazo telefaonina finday tapaka ihany koa aho satria latsaka avy tao amin'ny dashboard izany nandritra ny loza.
Rahampitso 29 aogositra no fihainoantsika voalohany. Manontany tena aho hoe ahoana no handraisan'ny fitsarana ny onitra izay nomena fa mbola marary mafy aho saingy tsy afaka mitady fanampiana ara-pitsaboana sahaza azy noho ny tsy fisian'ny vola? Ny fiantohana dia nandà ny handoavana ny saram-bola satria tsy hadisoako ny anao.
Azafady mba ampahafantaro ahy ny fomba tokony handehanako amin'ity raharaha ity?
Niainga teny an-dalana i Neny tamin'ny 7 septambra teo rehefa avy mitsidika izy no hiarahako aminy ao amin'ny trano filehanany.
Manantena aho fa handre avy aminao. Misaotra anao